Niatrika ny fiainana rehefa avy nasaina hisotro dite · Global Voices teny Malagasy
Niatrika ny fiainana rehefa avy nasaina hisotro dite
Nilahatra rano rehefa avy nisotro dite ary naka tavoahangin'etona
Voadika ny 28 Mey 2019 4:48 GMT
Sary eo am-pilaharana rano miaraka amin'ny mpifanolo-bodirindrina
Nahita tantara vitsivitsy amin'ny fitadiavana ny zavatra tsotra indrindra iainana izahay tamin'ny fotoanan'ny fanoherana sy ny fifandonana izay lasa anisan'ny fiainanay andavanandro, toy ny tantaran'ny mpifanolobodirindrina amiko teo amin'ny manodidina anay, rehefa nanasa ahy hisotro dite sy hiresadresaka izy, indray andro, ary nankany an-tranony aho. io andro io ihany koa no tokony handehanany haka ireo tavoahangin'etona any amin'ny sherifa satria lasa any amin'ny sherifa no maka izany noho ny krizin'ny tsy fisian'ny etona sy ny fahasarotan'ny fitadiavana izany.
Sahirana ity mpifanolo-bodirindrina amiko ity ary nandeha naka ny tavoahangin'etony ; Niaraka taminy aho ary tsy afa-nanokatra ilay tavoahangin'etona izahay avy eo mba hamantarana fa azo antoka izany. Nankany an-tranoko aho mba haka famoahana ilay tavoahangin'etona ary niverina tany amin'ny tranon'ilay mpiray tanana amiko mba hanokatra ilay tavoahangy. Kanefa tsy tafavohanay izany. Tazanay teo ampitan'ny tranony ny mpiara-monina aminay iray hafa mamahana ny ondriny ary nangataka ny fanampiany izahay. Tonga izy nanokatra izany; Nivoaka ny etona ary nampatahotra ny feo navoakany, nihemotra tery amin'ny sisiny ilay mpiara-monina aminay ary somary natahotra izahay, saingy nety ihany izany tamin'ny farany.
Fotoana vitsy taorian'izany, nisy kamiao mpitatitra rano ho an'ireo vahoaka mila izany, izay toa hita fa feno rano, ka afaka nameno ny tavoahanginy ilay mpifanolo-bodirindrina amiko noho izany, naka tavoahangy miisa 10 izy ary nandeha nilahatra izahay mba hameno izany. Samy nameno ny tavoahanginy avy ny vehivavy tsirairay teo amin'ny manodidina ary nangataka ahy hanampy azy hampiloloha ilay tavoahangy rehefa avy nofenoina rano hodiany, tena asa mafy izany.
Nihaona tamin'ny mpifanolo-bodirindrina amiko iray hafa aho nandritra ny famenoana rano ; vehivavy efa antitra izy; Nameno ny rano izy ary nanontany ahy hoe:
“Ry zanako vavy, nanambady ve ianao?”
Miasa angaha ianao sa inona no ataonao ? “
Nangataka ahy izy mba hijanona hiaraka aminy mandritra ny famenoana ny rano, ary avy eo dia nateriko tany an-tranony ny tavoahanginy ary mbola nangataka ahy hijanona izy mba hiala voly.
Nisy lehilahy iray nameno rano teo, nameno tavoahangy roa izy ary avy eo niverina nody niantso ny vadiny hanao ny asa ambiny, tsapako ny harerahany raha izy nitondra ny tavoahangin-drano teo ambony lohany iny.
Nitrahotraho ny orana ary nahafinaritra tokoa tao anaty rano sy ny fotaka ary ny hatsiaka. Rehefa afaka kelikely, sadaikatra ilay mpifanolo-bodirindrina amiko, tonga izy niala tsiny noho ny fanasany ahy tany an-tranony, niresaka sy nisotro dite sy nihinana zavatra hafa, saingy nandeha izahay naka ny tavoahangin'etona ary niverina nody mba hametaka izany sy hijery izany, ary avy eo nandeha nilahatra mba hameno rano niaraka tamin'ireo vehivavy teo amin'ny manodidina. Hoy aho anefa taminy: “Ity no fanasana tsara indrindra tsy mbola hitako hatrizay, naloto izahay noho ny fotaka sy ny hatsiaka, natahotra ny etona izahay, nameno ny rano izahay ary nanampy ireo vehivavy. Faly aho niaina ny toe-javatra izany ary vonona hiatrika ny fiainana “.
Niverina tany an-trano izahay ary nihomehy tamin'ny zava-nitranga “Avy nisotro dite dia nilahatra rano ary naka ny tavoahangin'etona ..sns”
Lasa fomba fiainan'ny Yemenita andavanandro izany nandritra ny efa-taona nisian'ny ady tany Yemen: Mitady ny zavatra tena ilaina fototra amin'ny fiainana mba hanohizana ny fivelomana sy mitady ny fanantenana na dia miharatsy aza ny toe-draharaha amin'ny maha-olombelona sy ny fiparitahan'ny kolerà tao Yemen vao haingana.
8 ora izayAzia Atsinanana
20 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana